नेपाल चेम्बर अफ कमर्स Archives - Lokpati.com
Tag - नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठ र नेपालका लागि रसियाली राजदुतबीच भेटवार्ता
काठमाडाैं, ३० भदाै। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले नेपालका लागि रसियाका राजदुत एलेक्सी ए. नोभिकोभसँग भेट गरेका छन् ।
भेटका अवसरमा दुई पक्षीय व्यापारिक, आर्थिक सम्बन्ध विस्तारका बारेमा छलफल भएको चेम्बरले...
विहिबार राजधानीमा बिभिन्न मुलुकहरुमा नेपालको राजदूत नियुक्ति भइ आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न जान लागेका...
काठमाडौं, २१ पौष । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको वुमन बिङ्का रुपमा रहेको नेपाल महिला चेम्बरले इजराइलका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त भएकी राजदूत डा. अञ्जान शाक्यलाई नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारीका लागि शुभकामना टक्राउदै हार्दिक...
बैंक / बित्त • समाचार
नेपाल सरकारका राजस्व सचिव शिशिर ढुङ्गानाले सो कार्यक्रममा...